खाडीमा छोराको नि’धन, परिवारमा रु’वाबासी – यति ठूलो सहयोग लिएर पुगे भाग्य न्यौपाने ( भिडियो सहित ) – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाण्डौं- पैसा कमाउन विदेश गएको छोराको मृत्यु भएदेखि घरमा सधैँ रुʼवावासी चल्छ, शव ल्याउन नʼपाउँदा परिवार निकै तनावमा रहेको छन्। वैदेशिक रोजगारको कमाईले घरपरिवारले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने आशा गरेका परिवारले कमाउने छोराको मृʼत्युसँगै सबै सपना चकʼनाचुर भएको छ।
आमा, श्रीमती, चार छोरा मृतक कै कमाʼईमा निर्भर रहेका थिए। आफ्नो घरको आर्थिक समस्या कम गर्न पैसा कमाउन बिदेश पुग्ने सबै नेपालिहरु भाʼग्यमानी हुदैनन्। कतिले राम्रोसँग पैसा कमाएर फर्कन्छ्न भने कतिले बिदेशी भुमिमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै एक प्रतिनिधि पात्र हुन् तेजलाल बुढा मगर। वैदेशिक रोजगारीका लागी गएका तेजलाल बुढा मगरले कहिले नफऽर्किने गरि बिदा भए।
साउदीमा करिब एक महिना अगाडि निधन भएका रुकुम पुर्व घर भएका ३८ बर्षिय तेज लाल बुढा मगरको सब अझै सम्म नेपाल आइपुगेको छैन। वहाँको सव नेपाल लेराउने पहल भइरहेको जनाइेको छ। उहाको घरमा ५८ बर्षको बुढी आमा श्रीमती र ४ छोरा छन् । ठुलो छोरा पनि शरीरिक रुपमा अपाङ्ग छन् , दुवै खुʼट्टामा समस्या छ। भाग्य न्यौपानेको टिम सहयोग रकम लिएर त्यहाँ पुगेका छन् । यो दु:खद घडीमा उहाहरुको समस्यालाई बुझेर मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
हाल अमेरिकामा रहेका चन्द्र बुढा मगर, जयदेव बुढा मगर, गौचन बुढा मगर र ईश्वर बुढा मगरको नेतृत्व तथा सम्पुर्ण युवाहरुको सक्रियतामा नेपाली रुपैया १२४३६१५ (बार्ह लाख त्रिचालिस हजार छ सय पन्ध्र) रुपैयाँ सहयोग संकलन गरी सहयोग प्रदान गरियको छ।
Prevसाँचिकै स’लह खाने ? नेपालमा प्रवेश गरेको किराबारे यसो भन्छन् विज्ञ ..
Next१७ वर्ष पछि साउदी अरबबाट फर्किं’दा (भिडि’यो स’हित)
मृत्युदण्ड कुर्दै छोरो युएई को जेलमा !, अडिएनन् बुढी आमाका आँशू ! (भिडियो सहित)
भोलि टुँडिखेलमा ७५ हजार भेला हुने……..
बेहुला बन्दा देखिए यस्ता देखिए रबि लामिछाने, यसरी भयो परम्परागत बिबाह -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
“गलबन्दीपछी” अन्जली अधिकारिको अभिनयमा नया भिडियो ‘चट्ट रुमाल’ सार्बजनिक -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
गोँगबुमा पुरुषको घाँटी रे,टी ह’त्या गर्ने महिला, आमाछोरीकै संल,ग्नता (भि,डियो सहित)